Ngaba uMfazi woMhlaza uyakhohlisa? Iimpawu zokuba angakhohlisa kuwe - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ngaba uMfazi woMhlaza uyakhohlisa? Iimpawu zokuba angakhohlisa kuwe
Ngaba uMfazi woMhlaza uyakhohlisa? Iimpawu zokuba angakhohlisa kuwe
Abasetyhini abanomhlaza bayakhusela, bathembekile kwaye nantoni na abayenzayo iya kuphumelela ukuthembela kwakho. Akukho kuninzi onokukuqaphela kwindlela abaziphethe ngayo ebengenakukufanelekela oko, nkqu nesidingo sokukhankanya ukukopela.
Ukonakala kuphela xa kubudlelwane kukuba amaqabane abo anokucinywa kukuzikhusela okungaphezulu. Inxalenye elungileyo malunga nokuba baya kwenza oomama abakhulu, ke ukuba ujonge ukwakha usapho, umfazi onomhlaza uya kwenza izimanga.
Iimpawu ezintlanu zomfazi onomhlaza ziyakukhohlisa:
Uza namabali acacisa malunga nokuchitha kwakhe ixesha lakhe.
Uhlala esecaleni xa ekunye nenkampani yakho.
Ubonakala ngathi uyadika kwaye uyacaphuka zizinto enanizithanda nobabini.
Wenze utshintsho olukhawulezileyo nolumangalisayo kwinkangeleko yakhe.
Uyazikhetha kwaye akaneliseki ebusweni bakho.
Ngaba umfazi onomhlaza uthembekile?
Uninzi lwexesha, ewe. Ukunyaniseka kwabo akunazi mida. Njengononkala omncinci ofihle iqokobhe lakhe, kuyakuthatha ixesha ukuba uMhlaza uzive ukhuselekile kwaye uvakala kunye nawe kwaye ade akwenze ungacinga ukuba uyakuphambuka kuwe.
Kodwa yiba nomonde, ubuntu babo obuthathaka buza kukwenza ulinde de uqiniseke ngeenjongo zakhe.
Kukhuselekile nokuba ukungabikho kokhuseleko kubudlelwane kuya kuyityhalela ukuba iyikhangele kwenye indawo, ngokunokwenzeka nendoda eyahlukileyo.
Ukuba uthatha isigqibo sokukukhohlisa, uya kuba nzima ukufumana. Umhlaza akakuthandi ukushiya naziphi na iingoma entlabathini. Phantse ngokungathi ulwandle luye lwakhukulisa naluphi na uphawu lokungathembeki kwakhe.
Intsapho enkulu enothando yenye yeenjongo eziphambili zomhlaza. Uya kuthanda ukuthanda wonke umntu kuyo kwaye uya kuphuma kwindlela yakhe yokuphakamisa, ukuxabisa, ukubonisa uthando kunye nokukhathalela amalungu osapho lwakhe.
Wazi njani ukuba umfazi onomhlaza uyakukhohlisa
Isizathu kuphela sokuba umntu onomhlaza aqhathe kukuhlawula. Ngokuqhelekileyo bahlala kude nesi senzo simanyumnyezi njengoko bengafumani lonwabo kuyo, kodwa bamkhohlise kwaye uya kulwa nomlilo, esebenzisa indlela efanayo yokuziphindezela.
uzalwe ngodisemba 21 oko kuthetha ntoni
Olu phawu luhlala lulo oluqhathwa ngabanye, ke yinto ekhuselekileyo yokucinga ukuba unokwanela. Ngoku nguye ophakela isitya esinye!
Kulula ukufunxa umhlaza wokukopela. Bahlala benika uthando nothando mihla le. Banjalo nje. Baza kukuntywila kwisiphelo sabo esingapheliyo sothando. Ukuba kwenzeka okwahlukileyo kwaye iCancer yakho iqala ukuziva ikude, ibanda kunesiqhelo. Lixesha lokuba uqale ukhathazeke.
Ngokuqinisekileyo, banokuhamba ngecala elibi, kodwa akusoloko ukuba iCancer yakho iyeke ukubonisa uthando kuwe.
Xa ulwalamano, qiniseka ukuba lo mfazi uya kukhanyisa imililo yothando kuwe. Kuya kufuneka uzive ungoyena mfo unethamsanqa njengoko intombazana yakho enomhlaza ikwenza ukuba ube yeyona nto iphambili kuye kwaye uya kuhlala ukubonakala kwakhe.
Umhlaza yinto enovelwano. Uya kuhlala ekulungele ukukumamela, kuba unokukuqonda kwaye uvelaphi.
Unokuziva uziva kwaye uziva kwaye angakunika intuthuzelo kunye neengcebiso. Kutheni eza kuhamba nayo yonke le ngxaki?
Lo mfazi ngumama ozelwe ngokwendalo. Iimvakalelo zakhe zoomama ziya kwandisa kubantu abathandayo, oku kubandakanya iqabane lakhe. Uya kuzama konke okusemandleni akhe ukukhusela naziphi na iingozi ezinokwenzakalisa umntu amthandayo.
Juni 24 ukuhambelana kweempawu zodiac
Ngokuqinisekileyo oku kuthetha ukuba uzakuzama ukwakha ubudlelwane obuhlala ixesha elide obuya kuthi ekugqibeleni bube ngumtshato owonwabisayo. Ngokwendalo, ufuna ukuba iitalente zoomama zandisele nabantwana bakhe ngenye imini.
Ukuba unomfazi onomhlaza okuthandayo, qiniseka, ume kufutshane kungekho ngozi yokuba nentliziyo eyaphukileyo. Aba bafazi bazigcina ekukhohliseni. Kwaye kutheni bengayi?
Ukukopa yinto embi. Ukophula ukuthembela komntu kuwe, ukungcatsha uthando lwabo nothando, ucekisa ixesha abalichithe nawe. Wonke umntu kufuneka awuthathe uMhlaza njengomzekelo ophilayo wendlela yokuba kubudlelwane.
Ngokuqinisekileyo bangabantu nje, baneziphene. Bayakuthetha ngezinto abangonwabanga ngazo xa zisiza kuwe kwaye baya kuhlala bezenza nabanye. Unqabile, huh?
Kukangaphi kufuneka ufumanise malunga nokuwa kwakho kwintlebendwane hayi kwiqabane lakho. Musa ukwenza impazamo koku kungabikho kothando. Basakukhathalela kakhulu, abanakukunceda ukuthetha ngolo hlobo amaxesha ngamaxesha.
taurus kunye ne-pisces yokuhambelana ngokwesondo
Ukunyaniseka kwabo akunamida. Bafuna ukuhlala bezinikele kubudlelwane obungaphumelelanga kuba abafuni ukuzenza nzima ngokuzisola.
Banovelwano kakhulu kwaye abafuni ukulimaza iqabane labo ngokwaphula ukuthembana kwabo kunye nokutyumza iimvakalelo zabo.
Ngokuqinisekileyo ngekhe uhambe gwenxa ekukhetheni iqabane elinomhlaza. Bayi-cherry ephezulu ngazo zonke iinzame abaya kuhamba kuzo ukuze uhlale wonwabile.
Esona sizathu sokuba baphele bekopa ngamanye amaxesha, kukuba bahlala bekhangela umphefumlo wabo.
Uzinikele, unyanisekile, unothando, ewe. Kodwa ngubani onokufuna ukwabelana ngazo zonke ezi zinto zilungileyo nomntu ongafanelekanga kubo? Ukuba awunguye kubo, uya kuba lixhoba lokuqhathwa.
Ukuba umnika uluvo lokhuseleko, uya kukunika uthando lwexesha elide. Eyona ndlela ilula yokumthomalalisa xa edinwe kakhulu, kukusebenzisa ubuntununtunu bemvakalelo yakhe njengenye yeengongoma zakhe ezomeleleyo hayi ngokucinga ukuba bubuthathaka.
Impendulo yomfazi ongumhlaza ekuqhatheni
Umfazi ongalunganga womhlaza. Naxa engcatshwe ngumntu amthandayo, uya kuhlala ecinga ngentlalontle yakho. Akayi kuba nomsindo xa umkhohlisa.
Akayi kuphosa into malunga nayo, akunike eyona mfazwe inkulu ebomini bakho, hayi. Akukho nanye kuloo mfazi. Into onokuyilindela kuye yingxoxo ezolileyo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uyi-empath. Uya kuzama ukubona izinto ngokokubona kwakho kwaye usenokuzibona njengengxaki ebangele konke oko.
Uya kumamela into oyithethayo, ngokuzithandela kwaye ngaphandle kwengxaki. Uyakukuvumela ukuba uqhubeke kwaye wazi malunga nendlela owazi ngayo entliziyweni yakho yeentliziyo ukuba wenze impazamo embi kwaye uyazi ukuba ubuhlungu obungakanani obubangele yena.
Ewe, awusoze, uphinde uyenze kwakhona, uyazi. Ubuncinci uyazi ukuba yile nto uyithethayo. Nokuba unolwazi lokuba unokuphinda uphinde uqhathe, umfazi onomhlaza uya kukuxolela ngeli xesha kwaye kunye niya kudlula.
Iimpawu ezintle nezingalunganga
Gcina ukhumbula, ayisosiphelo sebali. Uya kufumana uxolelo, kodwa ayizukuza lula. Ngokumngcatsha, ungcatshe nengcinga yokuba umhloniphile.
Ayisiyonto inokulungiswa ngokulula le. Kuya kufuneka uyinike yonke into oyifunayo ukuba ufuna ukuba umhlaza wakho uncume kwakhona ecaleni kwakho. Kwanasemva kokuba uxolelwe usenokubizwa ukuba uziphathe kakubi, akasoze alibale ngento oyenzileyo kwaye uya kukukhumbuza kaninzi ngendlela omenzakalise ngayo.
Unokufumana ukushumayela okufanayo kunina. Emva kwayo yonke loo nto, iimvakalelo zokuba ngumama ziya kukhaba kwaye uza kumhoya umntwana wakhe, ekule meko ukukhumbuza ukuba ungaphindi uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphindewaliwalilele ukuba emva koko, iimvakalelo zomama ziya kukhahlela kwaye uya kukhathalela umntwana wakhe, oku kule meko kukukhumbuza ukuba ungaphindi uphinde uphinde udibanise njengexesha lokugqibela.
Khathalela umfazi wakho onomhlaza. Into ekufuneka uyenzile kukumthanda, mhloniphe kwaye uya kufumana into efanayo, amatyeli alishumi. Ngubani ongayi kuhlala ethembekile kumfazi onjalo?
Ungamfumana njani uMfazi oPhethe umhlaza: Iingcebiso zokuMoyisa
Umhlaza womfazi kubudlelwane: Yintoni onokuyilindela?
Uhlobo lweCancer Flirting
Umfazi onomhlaza eluthandweni: Ngaba uyalingana?
Umhlaza wokuhambelana komfazi eluthandweni
U-Leo Tiger: iNkokeli eSebenzayo ye-Chinese Western Zodiac
Julayi 4 Imihla yokuzalwa
indlela yokutsala ibhinqa le-gemini ngesondo
ngowuphi umqondiso ngoSeptemba 2
Uphawu lweZodiac ngoNovemba 20
I-scorpio man pisces ibhinqa iyaqhekeka
Leo mfazi wescorpio ubuhlobo bomntu
ungajola njani nomfazi wanamhlanje
ipisces career horoscope ngodisemba 2015